NBUDATA VIDIYO VIDIYO NA AGBANWEGHARIA MAKA N'EFU - MMEMME NYOCHA - 2019
Gbanwee Free Video na Gbanwee 1.1.35.831
Na oge anyị, vidio anaghị adịkarị mma, ọbụnakwa na Youtube, ebe ha na-agbalị ịlụ ọgụ a, ọtụtụ mgbe enwere vidiyo na-adịghị mma. Ma ugbu a, n'iji usoro dị mfe ma dị mfe site na onye na-eweta ihe ntanetị CyberLink, nke a kpọrọ TrueTheater Enhancer, ị nwere ike melite mma nke vidiyo ahụ.
N'ezie, imeziwanye vidiyo vidiyo abụghị akụkọ, ọtụtụ mmemme, tinyere ụfọdụ site na CyberLink, enwewo ike ime nke a ruo oge ụfọdụ. Otú ọ dị, otu ihe dị iche iche nke usoro a bụ na ọ nwere ike ịbụ ngwa mgbakwunye maka ihe nchọgharị Ịntanetị.
Gbanwee ka o doo anya na ìhè
Ozugbo ị malitere vidiyo ahụ, ị ​​nwere ike ịgbanwe ngwa abụọ a. Ogwe ogwe aka dị n'aka nri. N'ezie, ọrụ abụọ a bụ akụkụ na enyemaka, n'ihi na ọkpụkpọ n'onwe ya bụ ngwá ọrụ na-eme ka vidiyo ahụ dịkwuo mma. Ihe niile a ga-ekwe omume site na usoro pụrụ iche nke na-edozi PowerDVD maara nke ọma.
Na mmemme ahụ, ị ​​nwere ike ịhụ ozugbo otú àgwà vidiyo dị mma. E nwere ọbụna ụdị elele abụọ - ma ị ga-ahụ vidiyo abụọ zuru ezu na àgwà dị iche iche dị iche iche na ihuenyo dị iche iche, ma ọ bụ na ị ga-ahụ otu vidio nke ekewara abụọ, otu n'ime ha ga-adị mma mma.
Usoro ihe omume a nwekwara ike ịbụ ihe egwu, mana naanị maka vidiyo na ị na-ele na Internet Explorer. O nwere ọrụ nile maka nke a - ịkwụsị, olu, ọnọdụ ihuenyo zuru ezu, na ihe ndị ọzọ.
Ụzọ a gosipụtara iji melite mma
Ikike nke ịlele nsonaazụ n'oge
Naanị ọrụ na vidiyo site na Internet Explorer
Enweghi ike ịdebe vidio na kọmputa
CyberLink TrueTheater Enhancer bụ ngwá ọrụ dị mma maka iwuli mma nke vidiyo ahụ, mana naanị mgbe ị na-ekiri ya. Enweghi ike izoputa maka vidiyo di nma na komputa, na n'usoro, usoro ihe omume a bu ihe omuma maka Internet Explorer, nke nwere ike imezi vidio a.
Download usoro ikpe nke CyberLink TrueTheater Enhancer
Ndepụta nke mmemme iji melite ogo video Mgbakwunye FxSound DFX Audio Enhancer CyberLink PowerDirector
EziTheater Enhancer bụ ngwa bara uru maka ịmegharị eriri vidiyo Flash, nke na-eme ka mma ọdịnaya nke ihe omume nwere ike ịmepụta.
Ọnụ: $ 20